ANGEKE BAYIKHOKHE IRENTI IZINYANGA EZINTATHU OSOMABHIZINISI BASETHEKWINI – Sivubela intuthuko Newspaper
ANGEKE BAYIKHOKHE IRENTI IZINYANGA EZINTATHU OSOMABHIZINISI BASETHEKWINI
UMNU Mxolisi Kaunda iMeya yaseThekwini ezokwamukela ithimba le-IATF2021.
IMEYA yoMkhandlu weTheku, uKhansela Mxolisi Kaunda iDolobha lakhe lithi osomabhizinisi abancane angeke bayikhokhe irenti izinyanga ezintathu zilandelana.
BATHI ncinci kamjoli osomabhizinisi abancane abaqashe ezindaweni eziphethwe uMkhandlu weTheku oholwa nguKhansela Mxolisi Kaunda njengoba sebenikezwe isibonelelo sokuthi bangayikhokhi irenti izinyanga ezintathu ezigcwele.
Lezi zindaba ezehle njengoju kosomabhizinisi abahlukene abasebenzisa izindawo zoMkhandlu weTheku ngenhloso yokuziphilisa kuthiwa angeke bayikhokhe irenti kusuka ngoJuly kuze kube kuphela izinyanga ezintathu golokoqo.
Lezi zindaba ziqinisekiwe yiwona qobo lo Mkhandlu ozichaza njengokubeka eqhulwini ngaso sonke isikhathi ukubaluleka kokukubhekelelwa kwezidingo ezimqoka zosomabhizinisi abancane.
Kuhlalukile ukuthi loluzwelo uMkhandlu weTheku ulibhekise nje ngqo kulabo somabhizinisi abancane abakhahlanyezwe yizibhelu zakamuva ezibonakale zidla lubi kakhulu kusona sonke isiFundazwe saKwaZulu Natal kwaze kwagcina sekukapakele naseGoli.
Lolu hlelo lwesibonelelo luphinde lufake nalabo somabhizinisi abadayisa emgwaqeni yezitaladini zaseThekwini.
Lo Mkhandlu uthi kuyimanje umatasa usebenza ngokukhulu ukuzikhandla lokhu ngenhloso yokufukula kabusha umnotho weTheku olimale kakhulu ngezikhahi zezibhelu.
Nokho lo Mkhandlu uthi uyethemba ukuthi konke kuzogcina kubonakale kubuyela esimweni inqobo nje uma kusetshenziswana futhi kubanjiswene.
Lo Mkhandlu udalule nokuthi abamabhizinisi amancane bazophinde bavunyelwe ukuthi bakwazi ukuthi babhalise kabusha ukuze amabhizinisi abo ezokwazi ukuthi asebenze kahle ngaphandle kokubhekana nezindleko ezimba eqolo.
Kuvelile nokuthi uMkhandlu weTheku uzibophezele ekutheni unikezele ngama-plan okwakhelwa bhusende kwezakhiwo zalabo somabhizinisi abasafufusa ezigcine zicekeleka phansi njengoba abantu babekade bevuke umbhejazane betapa ezitolo.
Lo Mkhandlu ukugcizelelile ukuthi zonke lezi zinhlelo ezimayelana nesibonelelo serenti zibhekiswe kubona bonke osomabhizinisi bakuleli dolobha akekho ozozithola evaleleka ngaphandle kwesizathu esibambekayo.
UNkonyeni ugezeke igilo ngamaphoyisa esifazane KwaZulu-Natal